China kpochapụwo Vinyl Railing Nkebi ndị na-emepụta na ngwaahịa | Ogologo
Offọdụ n'ime Longjie Railing Samples
Ngwa Ngwa Longjie
Ulo （steepụ, mbara ihu, wdg）
→ Ogige na Yard
→ Okporo .zọ
PICKET FENCE Uru
2. Ezigbo mma ma sie ike dika oke nkume.
Longjie Baluster jupụtara
Ngwa na mfe!
Easy iji wụnye na-emeghe anya si n'ebe ọ bụla na ị bụ na oche gị ma ọ bụ jakị.
Ihe ngwugwu Baluster ndị ọzọ
Ngwa na Mgbagwoju:
Imirikiti ndị na-eweta baluster infill anaghị ewepụta oge iji mepụta usoro zuru ezu iji mee ngwa ngwa ma belata ọnụ ọgụgụ nke ihe ndị na-eweta ọrụ dị mgbagwoju anya na oge.
Longjie Baluster juru
Mmezi Dị ala!
Adịchaghị mma mmiri mmiri igwe anaghị agba nchara ngwaike na baluster na-eme nke a fọrọ nke nta mmezi free.
Osisi, Nchara ma ọ bụ Ngwongwo Ngwakọta Ngwakọta
Osisi, nchara, ma ọ bụ igwe igwe mejupụtara niile chọrọ nhazi dị iche iche na-aga n'ihu. A ga-ese osisi ma ọ bụ nwee ntụpọ ma jigide ya kwa afọ. A ga-esegharị nchara nchara ihe dị ka afọ ise ọ bụla iji nyere aka gbochie nchara na nchara. Composite nwere ụlọ ọrụ dum nke ndị na-ehicha ihe, ndị nwere ntụpọ, na ndị na-emegharị ihe ọhụrụ iji nyere aka mee ka ọdịdị ahụ pụta.
Longjie baluster Jupụta
Nnukwu ikuku ikuku!
Usgbọ okporo ígwè Baluster na-enye ma ọhụhụ dị elu na ikuku ikuku dị ukwuu site na igwe. Ọ na-eme ka ikuku na-erugharị iji nyere gị aka ị jụụ n’ụbọchị anwụ na-ekpo ọkụ.
Enweghị mgbasa ikuku.
Ọ bụ ezie na igwe na-anya igwe na-enye ọhụhụ pụtara ìhè ọ na-ebelata mgbasa ikuku… Longjie baluster Infill na-agwakọta isi ihe abụọ ndị a na ngwaahịa dị oke ọnụ.
Aha Ịkwanyere Omuma igwe
Agba White / Tan / Nwa
Brand aha: Shanghai Longjie
Ngwa Igwe ndobe
Akwụkwọ ikike Ihe karịrị afọ 5
Tụkwasịnụ Ikike: 300 Ton / Tọn Kwa ọnwa
Nkwakọ ngwaahịa nkọwa Pee akpa na pallet
Port Ọdụ ụgbọ mmiri Shanghai Waigaoqiao, Port Shanghai Yangshan, Port Guangzhou Huangpu
Ihe onwunwe 100% Virgin PVC.
Nguzogide ikuku thePVC ngere usoro ga-eguzogide ikuku ifufe 10. Elu
Ọgwụgwọ Ọgwụ Ihe mkpuchi PVC
Akwụkwọ ikike EC ISO SGS FSC INTERTEK.
Uru Ntọala Mfe, Afọ Akụkọ, Adaba, Ọnọdụ akụ na ụba, Ọsọ ọsọ
Ngwa Dechọ Mma Homelọ, ogige, Roadzọ, Ogige.
Jiri Longjie nlereanya nwere ike ịchekwa ego nke na-eme ọhụrụ ebu
*** Mara: Dị ka ngwaahịa na-mgbe niile emelitere, biko kpọtụrụ anyị maka ọhụrụ nkọwa. ***
Usoro nke imepụta PVC kpochapụwo kpochapụ
Nke gara aga: Vinyl Nzuzo ngere Kit
Osote: Adịchaghị adị, na-akwụ ụgwọ steepụ